Ururka Bristol Horn Youth Concern ayaa cawa magaalada Bristol lagu soo bandhigey buugga “Waa maxay Autism iyo xaaladaha la xidhiidha”, |
Ururka Bristol Horn Youth Concern ayaa cawa magaalada Bristol lagu soo bandhigey buugga “Waa maxay Autism iyo xaaladaha la xidhiidha”,
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey oo ay soo qaban qaabiyeen ururka Bristol Horn Youth Concern ayaa cawa magaalada Bristol lagu soo bandhigey buugga “Waa maxay Autism iyo xaaladaha la xidhiidha”, ee uu qorey qoraaga da’da yar ee Siciid Maxamuud Xuseen. Waxa ka soo qeyb galay dhammaan qeybaha bulshada ee deggan magaalada Bristol, iyada oo qoraha buuggu uu madasha ku soo bandhigey nuxurka buugga iyo waxa buugga ku dhalliyey. Qoraha buuggan oo muddo badan daarasadeynaayey xanuunka Autism-ka iyo saameynta uu ku yeeshay qoysaska Soomaalida, ayaa buugga ku soo bandhigey waayo-aragnimada uu u leeyahay in uu arrintan u soo bandhigo Soomaalida, waxa kale oo qoraha buuggani uu ka sheekeeyey waxyaabahii uu arkey, ogaadey ka dib baadhistiisa.
Xafladda waxa ay dhammaan dadkii ka soo qeyb galay ay weydiimo badan weydiiyeen Qoraha buugga Siciid oo isaguna mid mid uga wada jawaabey. Waxa kale oo madasha ka Hadley dhammaan aqoonyahankii kale eek a soo qeyb galay. Ugu horreyn Cabdi Cumar Boobe oo ka mid ah aqoonyahanka magaalada Bristol ayaa ugu hambalyeye qoraha kaalinta uu ka qaatey inuu soo bandhigo buugga, oo uu sheegey inuu caawin doono qoysas badan oo deggan qurbaha. Waxa kale oo uu Cabdi si guud iyo si gaarab ugu booriyey dhammaan qoysaska Soomaaliyeed ee deggan qurbuhu iney isku xidhnaadaan, iska kaashadaan, dhinacna uga soo wada jeedsadaan sidii loo taageeri lahaa dhammaan carruurta uu helay xanuunkani.
Dhanka kale Macallin Xasan Cadhoole oo ka mid ah aqoonyahanka isaguna ku hawlan sidii dhallinta Soomaaliyeed loo bari laha aqoonta, oo madasha ka Hadley ayaa qoraha iyo dhammaan ka soo qeyb galayaashaba ugu hambalyey iney nasiib u heleen iney buuggan helaan, akhristaan, ka doodaan, macluumadka uu xambaarsan yahayna dhuuxaan. Isaga oo dhanka kale ugu baaqey dhammaan intii madasah ka soo qeyb gashey iney gaadhsiiyaan buuggan iyo farriinta uu xambaarsan yahay dhammaan qoysaska kale ee aan fursadda u helin iney yimaaddan xafladda
Waxa isaguna dhinaciisa ka Hadley aqoonyahan Abaadir Muuse Diiriye, oo isaguna qoraha iyo ka soo qeyb galayaashaba ku dhiirigaliyey iney iska kaashadaan sidii loo taageeri lahaa qoysadka ay saameysey arrintani, isaga oo dhanka kalena ku dhiiri galiyey dhammaan ka soo qeyb galayaashii iney buugga iibsadaan si qoraha iyo cid kasta oo ku hawlan buugaagta ay ugu noqoto hiil
Ugu dambeyntii waxa laga doodey, wax leyska weydiiyey sida ay muhiimka u tahay in la sameeyo daraasaad gun dheer oo lagu ogaanaayo, sababta, iyo saameynta uu xanuunkani ku yeeshay qoysas badan oo deggen qurbaha. Iyada oo madasha lagu weydiiyey su’aalo badan qoraha Buugga Siciid Maxamuud Xuseen oo uu isaguna mid kasta uga jawabey si aqoon, waayo-aragnimo iyo kalfurnaani ku dhisan.